कोरोनाले निम्त्याएको आर्थिक मन्दीपछि अर्थतन्त्रको नयाँ बाटो – rastriyakhabar.com
अरुण राज सुमार्गी। शताब्दीकै संकटकालका रूपमा आएको कोरोना भाइरस, यसले निम्त्याएको आर्थिक मन्दी र यसपछिको आर्थिक सुधारका पक्षहरूमा हामीले नेपालमा चाल्नुपर्ने कदमहरूका बारेमा बहस गर्नु जरुरी छ । के हिजो हाम्रो अर्थतन्त्र सबल थियो र ? के यो कालखण्डले निम्त्याएको मन्दीमा हाम्रो अवस्थालाई हामीले कसरी प्रक्षेपण गरेका छौं । कोरोनाको महामारीबाट जुधिरहेको विश्वतन्त्र र हाम्रो देशलाई सहयोग गरिरहेका दातृ देशहरूको अवस्था पुरानै प्रकारको सोचमा रहलान् । यस्ता अनेकन् प्रश्नहरू हाम्रो सामु खडा भएका छन् । हामीले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्न के हाम्रो देशका बैंकहरूको क्षमतामा भर पर्न सक्ने अवस्थामा हामी छौं ? हाम्रो राष्ट्र बैंक र सरकारद्वारा प्रस्तुत हुन लागेको मौद्रिक नीतिले हामीलाई कतिसम्म सहयोग पुग्नेछ । विगतका अनुभवहरू हेर्दा र हामीमाझ रहिआएको परम्परावादी सोचका बीच हामीले अग्रगामी छलाङ लगाउन कुनै कदम चाल्नेवाला छौं ? लामो समयदेखि करिब चार दशक देशको अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा रहेर आफूले रोजगारदाताको भूमिका खेलिरहँदा त्यस्तो प्रकारको आशालाग्दा दिनहरू महसुससमेत गर्न सकेका छैनौं ।